Miafina ao ambadiky ny fahalalahana miteny ny vaovao diso sy ny kabarim-pankahalana hoy ilay mpanao gazety Sloveniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Desambra 2019 6:17 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Shqip, Français, русский, Italiano, українська, English
Robert Boteri. Sary avy amin'ny Meta.mk, nahazoana alalana.
Navoaka voalohany tao amin'ny Meta.mk News Agency, tetikasan'ny Metamorphosis Foundation ity tafatafa ity. Navoaka eto ambany ny dika nasiam-panovana noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Sariitatr'i Victoro ORban sy ny sainam-pirenena Sloveniana miaraka amin'ny loko Hongroà avy amin'ny Mladina.
Nandritra ny taom-polo maro, anisan'ny ao amin'ny gazetiboky Sloveniana Mladina nankamamiana fatratra i Robert Boteri, izay nanana ny lazany hatramin'ny Yogoslavia teo aloha noho ny votoatiny mpisava lalana sy ny fombany tsy matahotra miresaka ireo lohahevitra mampiadihevitra.
Tamin'ny Aprily 2019, niteraka disadisa ara-diplaomatika ny Miadina rehefa namoaka fonon'ny gazetiboky ahitana ny sariitatry ny praiminisitra Hongroà Victor Orban manangana ny sandriny amin'ny fiarahabana Nazi no sady voahodidin'ny olo-malaza vitsivitsy avy amin'ny elatra havanana ao Slovenia, anisan'izany i Janez Janša. Nanondro ny fividianana fampahalalam-baovao Sloveniana maromaro vao haingana nataon'ireo mpanakarena naman'i Orban ilay sary, olona mifandray amin'ny antoko politikan'i Janša no tompon'ireo fampahalalam-baovao voalaza ireo teo aloha.
Tamin'ny resadresaka notontosain'ny Meta.mk, niresaka momba ny vaovao diso any Slovenia i Boteri, talen'ny famoronana ao amin'ny Mladina amin'izao fotoana izao. Nilaza izy, ohatra, fa tsy voasazy ireo tranonkala nasionalista amin'ny teny Sloveniana izay manaparitaka vaovao diso sy kabary feno fankahalana satria misoroka tsy hanasazy na iza na iza ireo mpitsara noho ny tahotra fa manohintohina ny fahalalahana miteny; na ny fomba faneken'ireo fampahalalam-baovao sasany ny kolikoly mba hanaratsiana mpanao politika sy ny mpandraharaha sasany.
Meta.mk: Inona matetika no lohahevitry ny vaovao hosoka ao Slovenia?
Robert Boteri (RB): Tato ho ato ny ankamaroan'ny vaovao diso dia nifandraika tamin'ny krizin'ny mpifindra monina. Nisy ny vaovao, indrindra tao amin'ny tranonkala nasionalista, ahitana fanehoan-kevitra ratsy izay natao daholo mba hanehoana ireo mpifindra monina ho olon-dratsy. Zavatra iray hafa koa ny fanaratsiana ireo mpanao politika sy ny mpandraharaha sasany, raha karamaina kosa ireo tranonkala sasany mba hamoaka tantara ratsy. Mandritra ny dingana, dia omena antontan-taratasy izy ireo, ary mamoaka izany ny tranonkala ary manomboka ny raharaha. Mora ny mahita amin'ny farany fa natao ho amin'ny tanjona iray izy io.
Meta.mk: Ahoana ny fihetsiky ny fanjakana sy ny media?
RB: Amin'ny fivazavazana! Tena be vazavaza hatrany. Raha mamoaka antontan-taratasy ianao amin'ny maraina izay natao mba hanohanana ny filazanao fa misy olona mahalala olona ary avy eo mitombo ny tantara mandritra ny andro, ary misy ny fandavana amin'ny hariva fa tsy marina ilay tantara, satria any Slovenia mifankafantatra daholo ny rehetra. Saingy, amin'ny faran'ny andro, tsy misy mahalala na inona na inona. Nisy ny vaovao nilaza fa niditra zoo tany Alemaina ireo mpifindra monina ary nihinana osy. Nahazo mpitsidika iray tapitrisa ny vaovao. Avy eo tonga ny vaovao iray fa tsy misy zoo mihitsy io tanàna io, na osy, ka tsy nisy velively io zava-nitranga io, ary taorian'izay, dia vitsy ny nitsidika ilay vaovao.
Meta.mk: Iza no mamoaka ity karazana “vaovao” ity matetika?
RB: Why frightening is that someone does these things for profit. Because a lot of clicks means adverts and a lot of money. It is not done because of conviction or ideology, but for money. That’s what the online media is.
RB: Ny tena mampatahotra dia manao izany zavatra izany hahazoana tombotsoa ny olona. Satria ny fahazoana mpitsidika marobe dia midika dokambarotra sy volabe. Tsy natao noho ny fandresen-dahatra na foto-kevitra izany, fa natao hahazoana vola. Izany no fampahalalam-baovao antserasera.
Meta.mk: Misy fanarahamaso hanoherana ny fiparitahan'ny vaovao diso ve?
RB: Manana mpanara-maso tokana ny fampitam-baovao, izay tompon'andraikitra ho an'ny firenena ka sarotra ho azy irery ny hisahana ny zava-drehetra. Avy amin'izany, resaka fotsiny no mandeha hampihena ny kabarim-pankahalana ao amin'ny aterineto, saingy tsy nisy olona voaheloka tao Slovenia, ny fehin-kevitra dia hoe teny ireo ary nosoratana tany ho any “tsy afaka miverin-dalana isika” , tahaka ny tao Yogoslavia teo aloha ary amin'ny fanaovana toy izany, dia manitsakitsaka ny fahalalahana miteny isika. Noho izany, dia azo atao mihitsy aza ny mandrahona olona, ​​vondron'olona, zom-pirenena, ary ireo rehetra ireo dia azo afenina ao ambadiky ny fahalalahana miteny.
Meta.mk: Misy lalàna mifehy ny kabarim-pankahalana ve ao Slovenia?
RB: Manana lalàna izahay, saingy manana ny heviny ny mpitsara fa raha tsy afaka mampifandray mivantana eo amin'ny teny voasoratra sy ny fihetsika heloka bevava ianao dia tsy azo henjehana izany. Midika izany fa milaza ianao hoe: “Apetrako eo amin'ny rindrina ireo mpifindra monina ary hotifiriko izy ireo” tsy hanenjika anao ny fitsarana satria hilaza izy fa vao avy nilaza izany ianao ary tsy manana basy hanatanterahana izany ianao, izany hoe, tsy tena heloka bevava tokony hotoriana.
Meta.mk: Ahoana ny hevitry ny fikambanan'ny fampitam-baovao?
RB: Ao anatin'ny krizy ny fikambanan'ny fampitam-baovao, satria tsy fantatr'izy ireo hoe iza no tokony hifampiresahan'izy ireo. Mpanao gazety avy amin'ny haino aman-jery pirinty no mpikambana ao amin'ny fikambanana, ary tsy mpikambana ao amin'ny fikambanana ireo mpanao gazety manoratra vaovao diso. Fampahalalam-baovao mpanaitaitra izay tsy mankatoa akory ny birao na ny fitsipika na inona na inona mifehy ny mpanao gazety izy ireo. Na adika tsotra hoe maloto ny zava-drehetra.
Meta.mk: Voatonona ao amin'ny fampitam-baovao Sloveniana ve i Makedonia?
RB: Azo antoka fa misy lahatsoratra toy izany. Namaky betsaka momba ireo pejy sandoka ho amin'ny tombotsoan'i Trump sy ireo vaovao diso hita ao anatin'izany ny olona, ​​ary hita indrindra eo amin'ny sehatra haino aman-jery Sloveniana ireo. Rehefa niova ny anaran'ny firenena ary rehefa nandositra ny firenena ho any [Hongria] ny praiminisitra teo aloha. Dia nisy olona nitafatafa mihitsy nanazava ny fomba fampiasàna ireo tahiry fitsikilovana ireo ho amin'ny tanjona politika.
Betsaka ny vaovao momba an'i Makedonia raha oharina amin'i Albania, Kosovo na Montenegro. Taloha, dia nahitana fonongazety natokana ho an'i Makedonia mihitsy ny Mladina nandritra ny fotoana fifandirana momba ny rano teo amin'ny vahoakan'i Vevchani sy Oktisi. Lohahevitra lehibe izany.
Meta.mk: Ary inona no sarin'i Makedonia, izay maniry ho mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana?
RB: Holazaiko aminao izao. Tena manohana anareo tokoa izahay hanatevin-daharana ny Vondrona Eoropeana, saingy mitandrema, satria manomboka ny olana amin'ny fotoana hidiranareo ao amin'ny Vondrona Eoropeana. Tahaka ny sekoly fanabeazana fototra ireo olana rehetra teo aloha ireo ary rehefa tafiditra ao amin'ny Vondrona Eoropeana ianao, ary hanomboka ny olana lehibe. Amin'izao fotoana izao ianao firenena mahaleotena ary manapa-kevitra ianao raha hanaiky ilay anarana vaovao na tsia. Rehefa miditra ao amin'ny Vondrona Eoropeana ianao dia tsy afaka manapa-kevitra momba ny zavatra sasany ary ho hafahafa aminao izany.